Banyere Anyị - Ningbo HQC ngwá electronic CO., LTD
Eriri Optic Nkesa
Akwa Patch Panel
Cabling Ngwá Ọrụ
Power Nkesa Unit
Ningbo HQC Electronics CO., LTD [HQC®] e hiwere na Ningbo dị ka a na-eduga emeputa pụrụ iche na-ahaziri Cabling ngwọta ihe karịrị afọ 20 R & D na mmepụta ahụmahụ.
HQC ngwaahịa tumadi na-ekpuchi,
1st , wires na USB Assembly
HDMI Gịnị, Optic eriri Gịnị na ịmachi udọ, LAN Gịnị na RJ11 / RJ45 patch udọ, DVI Gịnị, VGA Gịnị, Display port Gịnị, USB 2.0 na 3.0 Gịnị, RCA Gịnị, S-Video Gịnị, Oti mkpu Gịnị, Ọkà Okwu Gịnị, Scart Gịnị, Coaxial Gịnị, Power Gịnị, SATA, DB / DC Gịnị, dị iche iche na USB mgbakọ na Njikọta wdg
2nd cabinets na Tools
19 "oche, Open racks, Wall ugwu brackets kọbọd ngwa dị ka cable management mmanya, ofu ma ọ bụ eji shelf, Metal Keyboard, ewesakarị ma ọ bụ ndị na-abụghị ewesakarị ogwe, Fan ogwe, Network Crimping & agba & Punch ala ngwaọrụ, Network cable tester, Power nkesa unit (PDU) wdg
3Rd Faceplate na nwụnye Ngwa
Face efere, Keystone Jack, Patch panel, Fiber optic ọnụ igbe, ODF, LSA modular, n'elu igbe, ADSL modem splitter, Nkesa igbe, Telephone ngwa, ihe nkwụnye, Port Njikọta, ahaziri USB ngwaahịa na na.
1st High àgwà na Strong ikike
HQC nwere ihe abụọ kasị mmepụta bases na Ningbo (Orient Rack®) na Changzhou (LAN comax®), na ọrụ n'elu 2000 zụrụ nke ọma rụọ jikọtara na elu uzu ígwè na ule equipments, nke bụ ike nke na nnukwu olu iwu na-ana achi achi kasị nso etiti oge. HQC mgbe niile na-ekwusi na-elu àgwà na ihe ndị kasị asọmpi price.
2nd Ịchụ 0 ebubo nnọchi ọrụ
Anyị bụ ndị 100% maka anyị ngwaahịa mma na ogologo oge nkwa, na-enye ụda mgbe-ire ọrụ na 0 ebubo ngwa nnọchi usoro. HQC e mgbe eburu anyị ụkpụrụ "Ahịa afọ ojuju bụ anyị outmost mkpa".
3Rd Professional nkwurịta okwu ndabere na ike R & D ahụmahụ
Anyị kweere n'ezie na anyị ike ike, ihere na mbara otu ga-enye gị ọkachamara ngwaahịa na afọ ojuju ngwọta. Ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla maka gị obodo ina, anyị ga-enye ike engineering aka ma na pụrụ ịdabere na ọsọ ọsọ. HQC sales bụghị nanị na ọkachamara na etu esi, ma magburu onwe na ahịa ọrụ.
4nke Complete ngwaahịa usoro
HQC ezitekwara na nso nke Dọchị Cabling ngwaahịa izute ahịa anyị 'chọrọ. Ee, doro anya, ụfọdụ ngwa na-enye anyị kwenyere ụlọ mmepụta ihe, Otú ọ dị, ọ dịghị mmadụ na HQC enye zuru okè na ngwaahịa na kasị ala ahịa. 20 afọ oru ngo ahụmahụ n'ụlọ na mba ọzọ, anyị nwere zuru ezu ruru eru suppliers na ụfọdụ ngwa, onye àgwà ama kwupụtara na ọtụtụ nnukwu oru ngo. Ya mere, ihe niile na-na ngwaahịa, HQC nkwa nke kasị ala price ka anyị ahịa. N'ụzọ dị otú a, ọbụna obere iji ga-enwe otu magburu onwe ọrụ site anyị.
Dị nnọọ na-eche free eziga anyị gị chọrọ, nkọwapụta ma ọ bụ n'omume maka kwuru na a ga-aghọta ihe mere ihe na ọzọ ahịa na-ahọrọ na-ekwenyere HQC. Ọ bụ maa a oké ohere ịmepụta mmeri-mmeri na ị ga-tụrụ na ihe dị iche, ọ bụghị naanị na ịnye ọnụahịa kamakwa pụrụ ịdabere na bụla nkọwa, ike oru nkwado na oru oma na nkwukọrịta. Na-atụ anya-ewu ogologo oge azụ ahịa mmekọrịta na enyi anyị azụmahịa mmekọ n'ụwa nile.
Okwu: Ningbo HQC ngwá electronic CO., LTD